Shiinaha Qaangaarka ah - Dhallinta Scrimmage Practice Jerseys Team Pinnies Sports Vest Soccer, Kubadda Cagta, Soosaarayaasha iyo Badeecada Kubbadda Koleyga | RE-HUO
Qaangaarka - Dhallinta Tilmaanta Tababarka Jerseys Team Pinnies Sports Vest Soccer, Cagta, Kubbadda Koleyga
Diyaar u ah in la tartamo:U isticmaal jaakadahaas midabada kala duwan leh ee ciyaaraha kooxaha. Waxaad si cad u aqoonsan kartaa saaxiibbadaada iyo kuwa kaa soo horjeeda garoonka dhexdiisa.
Naqshad raaxo leh:Ka samaysan caag, pinni kasta oo kubbadeed waa mashiin la dhaqi karo, khafiif ah isla markaana leh dhinac u furan hawo qaadashada. Waa ku raaxeysasho in la xidho, adiga oo ku qaboobaya inta lagu jiro tartanka kulul.
Naqshad gaar ah: Waa wax bannaan - si aad u shakhsiyeeysid
Ku Haboon Ciyaaraha Sida Basketball, Kubadda Cagta, Kubadda Cagta, Kubbadda Laliska iyo Inbadan. Ku Fiican Hawlaha Dugsiga ee Kooxda iyo Waxqabadka Kooxda.
Nooca alaabta: Jaakada tababarka Scrimmage
Waxyaabaha: 120gsm 100% caag
Noocyo: Adeegga OEM
Farsamada: Daabacaadda shaashadda, wareejinta kuleylka, sublimation dheeha, daabacaadda iwm
Feature: Neefsasho, Dhaqdhaqaaq dhakhso leh, Cabbir Dheeraad ah, Anti-pilling, Eco-friendly
Midabka: Casaan / Liin dhanaan / Casaan / buluug qafiif / Madow / Iftiin cagaaran / Midab / Cagaar / Buluug madow / Jaale / Dahab / Fadhi / Caddaan
Cabir: S / M / L / XL
Dharka tababarka kaydka.
Dharka tababarka stock, our MOQ waa 50 gogo ', oo waxaad dooran kartaa cabirro badan iyo midabo
Haddii kor ku xusan uusan lahayn midabka aad rabto, waxaan sidoo kale leenahay adeegga dharka loo habeeyay, waxaan u habeyn karnaa dharka iyadoo loo eegayo shuruudahaaga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad bixiso midabka Pantone ee dharka ama u dir qayb ka mid ah dharka warshaddeena.
Kani waa jaantuska cabbirka ee aan kaydinay, Waxaan bixinnaa adeeg cabbirka la habeeyay
Waxaad dooran kartaa hal ama in kabadan oo habab daabacaad ah si aad dharkaaga tababarka uga dhigto mid aad moodada.
Waxaad noo soo dirtaa nashqadaada anaguna waan u daabacaynaa sidaad codsatay, hadaadan aqoon sida loo sameeyo nashqada dharka tababarka, waxaad noo soo diri kartaa astaantaada ama fikirkaaga, oo naqshadeeyeheena ayaa kuu dhameystiri kara naqshadda.
Waxaan bixinaa adeeg sumad gaar ah iyo sumad adeegsi, samaynta jaakad tababar ah oo leh astaan ​​kuu gaar ah.
Hore: Kubbadda jumlada jumlada kubbadda cagta ee dharka jaakadaha isboortiga ee tababarka kooxaha kubbadda cagta ee kubbadda koleyga ee qaangaarka Tababarka Vests
Xiga: Ciyaaraha Kubbadda Cagta ee Kubadda Cagta Kubbadda Cagta Vest Mesh Breathable Bibs
Blank Dhoobada Garabka Gacanta Unisex T Shaati Waayo Y ...
Tababarka Bibs Dadka Waaweyn iyo Carruurta Neefsasho Degdeg ah ...
Dharka gacmaha gaaban ee cudbiga ah ee dharka caadiga ah ...
Shaati polyester qalalan deg deg jumlada for marath ...